जेनेरिक भियग्रा: सस्तो भियाग्रा अनलाइनका लागि मार्गनिर्देशन - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी समुदाय, कल्याण कम्पनी, चेकआउट औषधि बनाम मित्र समाचार, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल स्वास्थ्य कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार
मुख्य >> औषधि जानकारी >> जेनेरिक भियग्रा: सस्तो भियाग्रा अनलाइन मार्गनिर्देशन
जेनेरिक भियग्रा: सस्तो भियाग्रा अनलाइन मार्गनिर्देशन
भियाग्रा इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) को उपचारमा यसको प्रभावकारिताका लागि परिचित छ, एक अवस्था जुन एक निर्माण प्राप्त गर्न वा राख्नको लागि अक्षमताको कारण गर्दछ। यो एक परेशान गर्ने निदान हुन सक्छ, तर धेरै पुरुषहरू भेट्टाउँछन् कि उनीहरूको अवस्था भियाग्राबाट निको भएको छ।
यो एक प्रभावकारी उपचार हो, तर यो महँगो हुन सक्छ। शुभ समाचार? तपाईं ब्रान्ड-नाम भियग्राको सट्टा जेनेरिक भियग्रा खरिद गरेर महत्त्वपूर्ण पैसाको बचत गर्न सक्नुहुनेछ। होशियार हुनुहोस् यदि तपाईं सामान्य भियग्रा अनलाइन खरीद गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ (वा एक बिक्रेताबाट) iaभियग्रा संसारमा सब भन्दा नक्कली औषधी हो, त्यसैले सम्मानित फार्मेसीको लागि खोजी गर्न समय खर्च गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
जेनेरिक भियाग्रा (सिल्डेनाफिल) कसरी ब्रान्ड-भियाग्रा भन्दा फरक छ?
इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्रग्सहरू फास्फोडीस्टेरेस इनहिबिटरहरू (वा PDE5 इनहिबिटरहरू) हुन्, जसको मतलब यसले चिकनी मांसपेशीय टिशूलाई आराम गर्न र रगत प्रवाह बढाउन मद्दत गर्दछ। धेरै प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ED को उपचार जस्तै सेन्डेरा (एवानाफिल), लेविट्रा (भर्डनाफिल), र सियालिस (टडालाफिल), तर भियग्रा (सिल्डेनाफिल) सायद सबैभन्दा प्रख्यात र सबैभन्दा लोकप्रिय ईडी गोली हो।
सिल्डेनाफिल दुबै जेनेरिक र ब्रान्ड नाम भियाग्रामा सक्रिय संघटक हो। फाइजरले ब्रान्ड र जेनेरिक संस्करण पनि निर्माण गर्दछ, जुन मार्केटिंग र यसको सहायक ग्रीनस्टोनद्वारा बेचिन्छ। ब्रान्ड नाम भियाग्रा यसको रंगको कारण सानो ब्लू पिल उपनाम दिइयो। ग्रीनस्टोनको सिल्डेनाफिल एक सेतो ट्याब्लेट हो जसले भियग्राको चार-पक्षीय वा हीरा आकार कायम गर्दछ। अब जब भियाग्रामा पेटेन्टको समयावधि सकियो, धेरै अन्य कम्पनीहरूले सिल्डेनाफिल बनाएर बिक्री गर्छन्। ती ट्याब्लेटहरू सेता, नीलो वा हरियो हुन सक्छन् र गोलो वा बिभिन्न हुन सक्छ। जे होस् र the र आकार फरक छन्, साल्डेनाफिल र ब्रान्ड नाम भियाग्रा बीच प्रभावकारितामा वास्तवमै कुनै भिन्नता छैन।
कसरी घर मा toenail कवक हटाउन
सियालिसमा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
Cialis मूल्य सतर्कताको लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
एफडीएका अनुसार, जेनेरिक औषधिहरूको प्रभावकारितामा बिल्कुल भिन्नता छैन जब ब्रान्ड-नाम फारममा समान औषधी र खुराकको तुलनामा, एमडी डेभिड बेलक भन्छन्। त्यो भियाग्रा पनि समावेश छ। लगभग सबै प्रिस्क्रिप्सन्स को 2017 87% संयुक्त राज्य अमेरिकामा भरे देखि २०१ filled देखि सामान्य औषधीका लागि थिए। यसको मतलब जेनेरिक औषधिहरू आठ मेडिकल सर्तहरु मध्ये सात को उपचार गर्न ठीक काम गरीरहेको छ जसलाई पछिल्लो तीन बर्षमा प्रिस्क्रिप्शन औषधि आवश्यक पर्दछ।
यदि जेनेरिक र ब्रान्ड नाम भियाग्रा को खुराक एकै हो भने, तिनीहरूले ED लाई समान तरिकाले व्यवहार गर्नेछन्। जेनेरिक र ब्रान्ड नाम भियाग्रा बीचमा भिन्नता केवल बिरामीहरूसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ मूल्य। जेनेरिक औषधिहरू ब्रान्ड-नाम औषधिहरू भन्दा धेरै सस्तो हुन्छन्, र धेरै व्यक्तिहरूले प्रिस्क्रिप्शन बचत कार्डको साथ जेनेरिक भायाग्रा खरिद गरेर अझ बढी पैसा बचत गर्दछन्।
ब्रान्ड-भियाग्राको तुलनामा किन सामान्य भियग्रा यति सस्तो छ?
जेनेरिक भियाग्रा (भियाग्रा भनेको के हो?) ब्रान्ड-नाम भियाग्राको तुलनामा सस्तो छ, तर यो सधैं यस्तो थिएन। जब फाइजर, भियग्रा को मूल पेटन्ट धारक र निर्माता, भियाग्रा बेच्न को विशेष अधिकार थियो, यो महँगो थियो। २०१ Before अघि, एक ट्याब्लेटको लागी $ $। लागत हुन सक्दछ। त्यो मात्र होईन, तर धेरै बीमा कम्पनीहरूले इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्रग्सको लागत पनि कभर गर्दैन, त्यसैले भियाग्रा लिनु धेरै व्यक्तिको लागि विकल्प थिएन।
जेनेरिक भियाग्रा अब तेभा र फाइजर (ग्रीनस्टोन) को माध्यमबाट उपलब्ध छ र २०२० मा अन्य औषधी निर्माताहरू मार्फत उपलब्ध हुन सक्छ। जति धेरै औषधी कम्पनीहरूले जेनेरिक भियग्रा उत्पादन गर्न थाल्छन, यसले अन्ततः मूल्यलाई अझ तल झार्नेछ। यद्यपि अन्य औषधि निर्माताहरूले जेनेरिक भियाग्रा बेच्न सक्नेछैन जब सम्म फाइजरको पेटन्ट अप्रिल २०२० मा समाप्त हुँदैन।
तपाईंको प्रिस्क्रिप्शनको मात्रा र शक्ति कति सामान्य भियग्रा लागतको एक कारक हुनेछ। ED गोली २ mg मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, र १०० मिलीग्राम खुराकमा आउँदछ। ब्रान्ड-नाम भियाग्रा अब प्रति गोली around around० को लागी खर्च गर्दछ, त्यसैले,, १०० मिलीग्राम ट्याब्लेटको आपूर्ति $ 20२० हुनेछ। जेनेरिक भियाग्राको वर्तमानमा प्रति गोली about $० लागत छ, जसले,, १०० मिलीग्राम ट्याबलेट २$० डलरमा राख्नेछ।
अझ अधिक बचत गर्नको लागि प्रिस्क्रिप्शन सेभिंग कार्ड प्रयोग गर्नुहोस्। एकलकेयर औषधि फार्मेसीसँग काम गर्दछ यसको बचत कार्ड प्रयोगकर्ताहरूको लागि राम्रो मूल्यहरू सुरक्षित गर्न। तपाईं एकलकेयरको न्यूनतम मूल्यहरू तुलना गर्न सक्नुहुन्छ भियग्रा वा सिल्डेनाफिलको लागि खोजी गरेर singlecare.com मा। यी भियाग्रा कुपनहरू लोकप्रिय फार्मेसीहरू जस्तै सीवीएस, वालमार्ट, र वालग्रीन्स, मा योग्य छन्।
एक zpack के उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ
के म जेनेरिक भियग्रा अनलाइन किन्न सक्छु?
जेनेरिक भियाग्रा प्रिस्क्रिप्शनको साथ होम डेलिभरीका लागि अनलाइन किन्न सकिन्छ। यो भियाग्रा अनलाइन खोजी गर्दा तपाइँको अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। भियाग्रा संसारमा सब भन्दा नक्कली औषधि हो। फाइजर ग्लोबल सिक्युरिटीले गरेको अध्ययनमा, भियग्रा बेच्ने दाबी गर्ने करीव %०% साइटहरू वास्तवमै नक्कली गोलीहरू बेचिरहेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय साइटहरूबाट सस्तो भियाग्रा अनलाइन खरीद नगर्नुहोस्, किनभने संयुक्त राज्य बाहिरका देशहरूमा औषधि निर्माणमा फरक-फरक नियमहरू छन्। वेबसाइटहरू र अनलाइन फार्मेसीहरू छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ। सूचीमा अनलाईन फार्मेसीहरूमा तपाईंको खोजी सीमित गर्नुहोस् प्रमाणित इन्टर्नेट फार्मेसी अभ्यास साइटहरू (VIPPS) । यी मान्यता प्राप्त वेबसाइटहरूले नक्कली भियाग्रा बेच्ने छैनन्। नक्कली भियाग्रामा नीलो प्रिन्टर मसी, एम्फीटामाइन्स, धेरै वा धेरै सक्रिय संघटक, र अन्य विषाक्त रसायनहरू समावेश हुन सक्छ।
के म काउन्टरमा भियाग्रा किन्न सक्छु?
बेलायतका नागरिकहरूलाई पर्ची आवश्यक पर्दैन र काउन्टरमा भियाग्रा किन्न सक्नुहुन्छ। बेलायत पहिलो देश हो जुन ओभर-द-काउन्टर भियाग्रा खरीद गर्न अनुमति दिईन्छ, जुन कालो बजार भियाग्राको अवैध बिक्री रोक्न मद्दत गर्ने निर्णय भएको थियो। जे होस्, यदि तपाईं संयुक्त राज्यको नागरिक हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई अझै पनि आवाश्यक हुन्छ डाक्टरको पर्चे भियाग्रा अनलाइन वा स्थानीय फार्मेसीमा खरीद गर्न।
भविष्यमा काउन्टरमा भियाग्रा खरीद गर्न सम्भव छ। अहिलेका लागि, यद्यपि एक पर्चेको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श र छुट कार्यक्रमको बारेमा सोध्नु औषधि खरीद गर्ने उत्तम तरिका हो।
भियाग्राको अन्य प्रयोगहरू
Viagra कहिलेकाँही ईरेक्टाइल डिसफंक्शन बाहेकको चिकित्सा अवस्थाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। सिल्डेनाफिल साइट्रेट भियग्रा र रेवटिओ दुबैको मुख्य घटक र जेनेरिक बराबर हो। रेवाटिओ (सिल्डेनाफिल) पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचाप (पीएएच) को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, जुन फोक्सोमा उच्च रक्तचाप हुँदा हुन्छ। पल्मोनरी उच्च रक्तचापले चक्री, थकान, र सास फेर्न जस्तै असहज लक्षणहरू निम्त्याउँछ।
यद्यपि रेवटिओ र भियग्रा दुबै सिल्डेनाफिल हुन्छन्, रेव्याटियो कम डोजमा दिइन्छ र ट्याब्लेट (२० मिग्रि), निलम्बन, वा इन्जेक्सनको रूपमा आउन सक्छ। सिल्डेनाफिल साइटरेटले ED र PAH दुबैको उपचार गर्न सक्दछ किनभने यसको रक्त नलीहरूमा मांसपेशीहरूलाई आराम गर्ने र रगत प्रवाह बढाउने क्षमताको कारण।
सिल्डेनाफिल साइड इफेक्टहरू
कुनै पनि औषधीको रूपमा, त्यहाँ साइड इफेक्टको लागि सम्भाव्यता सधैं हुन्छ। यद्यपि यो दुर्लभ हो, केही व्यक्तिलाई सिल्डेनाफिलमा एलर्जी प्रतिक्रिया हुन सक्छ। यदि तपाईंसँग एलर्जी प्रतिक्रिया छ भने तपाईंले तत्काल चिकित्सकीय ध्यान खोज्नु पर्छ। यहाँ साधारण साइड इफेक्टको सूची छ:
कति मानिसहरु खाने विकार बाट प्रभावित छन्
पेट क्षेत्र मा पेट वा कोमलता परेशान
जलेको, झुम्कने वा सुन्न
एक दर्दनाक निर्माण वा एक जुन चार घण्टा भन्दा लामो हुन्छ
पेशाब गर्दा ब्लैडर वा दुखाई
कानमा घण्टी बजिरहेको वा सुन्ने क्षति
मांसपेशी दुखाइ वा पीडा
यो औषधि लिनु सम्भावित खतरनाक हुन सक्छ र चरम अवस्थाहरूमा, हृदय रोग भएका व्यक्तिहरूको लागि हृदयघात हुन सक्छ। सिल्डेनाफिल एक भासोडिलेटर हो, जसले रक्तचाप कम गर्न सक्छ। जे होस्, यो प्राय जसो व्यक्तिहरूको लागि समस्या होईन, यदि मुटु रोगबाट पीडित व्यक्तिले सिल्डेनाफिलको साथ नाइट्रेट्सको साथ औषधी सेवन गरिरहेको छ भने, गम्भीर निम्न रक्तचाप हुन सक्छ। कुनै औषधि लिनु अघि व्यावसायिक चिकित्सा सल्लाह लिनुहोस्।
अन्य दुर्लभ दुष्प्रभावहरूमा समावेश:
कसरी औषधि को बेवास्ता गर्ने
पुरुषहरु को लागी सर्वश्रेष्ठ आत्म हेरचाह: 25 आइटम केटाहरु को आवश्यकता छ
तपाइँ कसरी जान्नुहुन्छ यदि योजना बी काम भयो
मांसपेशी दुखाइ को लागी काउन्टर औषधि भन्दा राम्रो
के म मेरो बीमा कार्ड बिना डाक्टर जान सक्छु?
जनसंख्या को कति प्रतिशत अवसाद छ
Zyrtec र xyzal बीच के फरक छ?
बीमा बिना जन्म नियन्त्रण चक्की को मासिक लागत